श्रीमान विदेशमा, श्रीमतीमाथि परिवारबाटै यौन हिंसा !
माथि उल्लेखित घटना पुरुषहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रीमतीहरुले भोग्नुपरेको हिंसाका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । पुरुष रोजगारीमा जाँदा उनका श्रीमतीहरुले चुकाउनु परेको सामाजिक मूल्यमध्ये यौन हिंसा डरलाग्दो छ ।
महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक, घरेलु मात्र होइन, यौन हिंसाको समेत शिकार हुने गरेका छन् ।
उनको विवाह हुने बित्तिकै श्रीमान् विदेश गएका थिए । भूकम्प जाँदा पनि श्रीमान घरमा नभएकाले सबै काम आफैंले गर्नु पर्‍यो । परिवारका सदस्यले भने अनेक आरोप लगाउँथे । ‘एक पटक मुर्छा परेर ढलेछु । भाइले हस्पिटल लग्यो’ उनले अध्ययन टोलीसँग भनेकी छन्, डाक्टरले कमजोरी भन्यो तर परिवारका सदस्यले अवैध गर्भपतन गरी भन्ने आरोप लगाएर घरमा हेँला गर्न थाले ।’
सिन्धुपाल्चोकका साथै धनुषामा गरिएको अध्ययनले सानै उमेरमा विवाह भएका केटीहरु, जसको श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा छन्, उनीहरु बढी सामाजिक हिंसाको शिकार हुने गरेको पाइएको छ । एउटै महिलालाई विभिन्न प्रकारका हिंसा पनि हुने गरेको पाइएको छ’ आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
पुरुष विदेशमा रहँदा श्रीमतीहरुमाथि हुने अर्को हिंसा आर्थिक हो । एकातिर श्रीमानले पैसा नपठाउने र अर्कातिर घर परिवारले खान–लाउन नदिने समस्या छ ।सबै जना एउटै टहराको फरक विस्तारामा सुत्ने गर्थे । साँझमा प्रायः रक्सी खाएर आउने ससुरा मसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्थे । ससुराले आफ्नै विस्तारमा कपडा खोलेर शारीरिक सम्बन्धका लागि मेरो विस्तारामा आएका रहेछन् । मैले थाहा पाएपछि गालामा एक चड्कन लगाएर धकेलेँ ।
कतिपयको अवस्था भने फरक छ । विवाह गरेर विदेश गएका श्रीमानले सुरुमा आफ्नो नाममा पैसा नपठाउने तर बच्चा जन्मिएपछि भने पठाउने गरेको अनुभव छ ।
पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रीमतीहरु यौन हिंसामा पनि गरेका छन्, त्यो पनि बाहिरी पुरुषभन्दा घरकै संरक्षक भनिने ससुरा, जेठाजु, देवर जस्ताबाट ।
मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा घर परिवारबाटै यौन हिंसा भोग्नेहरुको पीडा आंकलन गर्नै नसकिने अवस्था छ ।
श्रीमान रोजगारीका लागि गएपछि श्रीमतीहरुले घरेलु हिंसा पनि बढी नै भोग्नु परेको पाइएको छ । खासगरी सासु र बुहारीको असमझदारीकै कारण हिंसा हुनेछ ।
मानवअधिकार आयोगले बैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाका श्रीमतीहरूले चुकाउनुपरेको सामाजिक मूल्यबारे राष्ट्रव्यापी अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । साथै महिलाहरू सामाजिक, तथा पारिवारिक बहिष्कारसम्मको स्थितिमा रहेको भन्दै आवश्यक कदम चाल्न भनेको छ । अनलाइनखबर २०७६ साउन २२ गते १५:१३ मा प्रकाशित
PREVIOUS POST Previous post: के हो यौनिक तथा लैंगिक हिंसा ?
NEXT POST Next post: कतै तपाईं ‘एब्यूसिव रिलेशनशिप’को शिकार त हुनुभएको छैन ?